Indlela Yokunqula UThixo Size Sisondelelane Naye | Sondela
“Sondelani KuThixo Naye Uya Kusondela Kuni”
1-3. (a) Yintoni esinokuyifunda ngokubunjwa kwabantu ngokuqwalasela ulwalamano oluphakathi kwabazali nosana lwabo? (b) Yintoni edla ngokwenzeka ngokwemvelo xa ubani othile ebonisa uthando kuthi, yaye nguwuphi umbuzo obalulekileyo esinokuzibuza wona?
ABAZALI bayavuya xa bebona usana lwabo olusandul’ ukuzalwa luncumile. Badla ngokusondeza ubuso babo kobo bosana, beluteketisa yaye bencumile. Bayakulangazelela ukubona indlela olusabela ngayo. Kungabanga thuba lide, bayayibona—izidlele zosana ziba nezinxonxo, imilebe iswabuluke, kuze kulandele uncumo oluhle. Ngandlel’ ithile, olo ncumo lubonakala lukukuqala kosana ukubonisa ukusabela kuthando oluboniswe ngabazali balo.
2 Ukuncuma kosana kusikhumbuza okuthile okubalulekileyo ngokubunjwa kwabantu. Ngokwemvelo uthando silubuyekeza ngothando. Yindlela leyo esenziwe ngayo. (INdumiso 22:9) Njengoko sikhula, iya iphucula nendlela esilubuyekeza ngayo uthando oluboniswayo kuthi. Mhlawumbi usenokukhumbula indlela abazali bakho, izalamane okanye abahlobo ababonisa ngayo uthando kuwe ngoxa wawusengumntwana. Intliziyo yakho yayizaliswe luvuyo, waza walubonakalisa ngezenzo. Wasabela ngokuthi nawe ubonise uthando. Ngaba kwenzeka into efanayo nakulwalamano lwakho noYehova uThixo?
3 IBhayibhile ithi: “Thina ke, sinalo uthando, kuba wasithanda kuqala.” (1 Yohane 4:19) KwiCandelo 1 ukusa kwelesi-3 lale ncwadi, uye wakhunjuzwa ukuba uYehova uThixo uye wasebenzisa amandla akhe, okusesikweni, nobulumko bakhe ngeendlela zothando ukuze kungenelwe wena. Yaye kwiCandelo 4, ubonile ukuba uye walubonakalisa ngokungqalileyo uthando lwakhe ngoluntu—kuquka nawe—ngeendlela eziphawulekayo. Ngoku kuphakama umbuzo. Ngandlel’ ithile, lo ngowona mbuzo ubalulekileyo unokuzibuza wona: ‘Ndiza kusabela njani kuthando lukaYehova?’
Oko Kuthetha Kona Ukuthanda UThixo
4. Abantu badideke njani ngokuphathelele oko kuthethwa kukuthanda uThixo?
4 UYehova, uMsunguli wothando, wazi kakuhle ukuba uthando lunamandla angathethekiyo okuvelisa ezona mpawu zintle kuthi. Ngoko ke, phezu kwayo nje imvukelo ezingisileyo yoluntu olungathembekanga, uye wahlala enentembelo yokuba lukho uluntu oluya kusabela eluthandweni lwakhe. Yaye, eneneni, izigidi ngezigidi ziye zenjenjalo. Noko ke, ngelishwa iinkonzo zeli hlabathi lonakeleyo ziye zabashiya abantu bedidekile ngokuphathelele oko kuthethwa kukuthanda uThixo. Abantu abaninzi bathi bayamthanda uThixo, kodwa babonakala becinga ukuba olo thando luyimvakalelo nje kuphela emele ivakaliswe ngomlomo. Ukuthanda uThixo kusenokuqala ngaloo ndlela, njengokuba nothando losana ngabazali balo lusenokuqala ngoncumo. Noko ke, kubantu abakhulileyo uthando lubandakanya okungakumbi.
5. IBhayibhile iluchaza njani uthando ngoThixo, yaye kutheni loo nkcazelo ifanele ibe nomtsalane kuthi?
5 UYehova uyakuchaza oko kuthetha kona ukumthanda. ILizwi lakhe lithi: “Ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imiyalelo yakhe.” Ngoko, uthando ngoThixo lufanele lubonakaliswe ngezenzo. Enyanisweni, abaninzi abakufumanisi kulula ukuthobela. Kodwa le ndinyana yongezelela ngobubele isithi: “Kwaye ayinzima imiyalelo [kaThixo].” (1 Yohane 5:3) Imithetho nemimiselo kaYehova yenzelwe ukusinceda, kungekhona ukusicinezela. (Isaya 48:17, 18) ILizwi likaThixo lizaliswe yimimiselo yokusinceda sisondele kuye. Njani? Makhe sihlolisise iinkalo ezintathu zolwalamano lwethu noThixo. Zibandakanya unxibelelwano, unqulo nokumxelisa.
6-8. (a) Yiyiphi indlela esinokumphulaphula ngayo uYehova? (b) Sinokuzenza njani ziphile iZibhalo xa sizifunda?
6 ISahluko 1 sitshayelele ngombuzo othi, “Ngaba unomfanekiso-ngqondweni wakho uncokola noThixo?” Sibonile ukuba oku kwakungeyongcamango nje ethelekelelwayo. Eneneni, uMoses wabandakanyeka kwincoko elolo hlobo. Kuthekani ngathi? Ladlula ixesha lokuba uYehova athumele iingelosi zakhe ukuba zincokole nabantu. Kodwa uYehova unendlela ebalaseleyo yokunxibelelana nathi namhlanje. Sinokumphulaphula njani uYehova?
7 Ekubeni “sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo,” uYehova simphulaphula ngokufunda iLizwi lakhe, iBhayibhile. (2 Timoti 3:16) Ngoko uKumkani uDavide wabongoza abakhonzi bakaYehova ukuba balifunde “imini nobusuku.” (INdumiso 1:1, 2) Ukwenjenjalo kufuna ukuba senze umgudu omkhulu. Kodwa yonke imigudu elolo hlobo ibalulekile. Njengoko sibonile kwiSahluko 18, iBhayibhile ifana neleta exabisekileyo esiyibhalelwe nguBawo wethu osemazulwini. Ngoko ukuyifunda akufanele kube yindinisa. Simele sizenze ziphile iZibhalo xa sizifunda. Sinokukwenza njani oko?
8 Yiba nomfanekiso-ngqondweni weziganeko ofunda ngazo eBhayibhileni. Zama ukubabona ngeliso lengqondo abantu ekuthethwa ngabo eBhayibhileni. Zama ukuqonda imvelaphi yabo, iimeko neentshukumisa zabo. Emva koko, cinga nzulu ngoko ukufundayo, uzibuze imibuzo enjengale: ‘Le ngxelo indifundisa ntoni ngoYehova? Luluphi uphawu lwakhe olubalaseliswayo? Nguwuphi umgaqo uYehova afuna ndiwufunde, yaye ndinokuwusebenzisa njani ebomini bam?’ Funda, camngca, uze wenze—ngaloo ndlela, iLizwi likaThixo liya kuphila kuwe.—INdumiso 77:12; Yakobi 1:23-25.
9. Ngubani “ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi,” yaye kutheni kubalulekile ukuba siliphulaphule ngenyameko elo “khoboka”?
9 Kwakhona uYehova uthetha nathi ‘ngekhoboka elithembekileyo neliyingqondi.’ Njengoko uYesu wayexele kwangaphambili, kuye kwamiselwa amaKristu athanjisiweyo ukuba alungiselele ‘ukutya ngexesha elifanelekileyo’ ebudeni bale mihla yokugqibela ezaliswe ziinkathazo. (Mateyu 24:45-47) Xa sifunda uncwadi olulungiselelwe ngenjongo yokusinceda sizuze ulwazi oluchanileyo lweBhayibhile naxa sisiya kwiintlanganiso nakwiindibano zamaKristu, siyondliwa ngokomoya lelo khoboka. Ngenxa yokuba eli ilikhoboka likaKristu, ngobulumko sithobela amazwi kaYesu athi: “Nikelani ingqalelo kwindlela eniphulaphula ngayo.” (Luka 8:18) Siphulaphula ngenyameko kuba siyaqonda ukuba ikhoboka liyenye yeendlela uYehova anxibelelana ngazo nathi.
10-12. (a) Kutheni umthandazo usisipho esimangalisayo esivela kuYehova? (b) Sinokuthandaza njani ngendlela emkholisayo uYehova, yaye kutheni sinokuba nentembelo yokuba uyayixabisa imithandazo yethu?
10 Kodwa kuthekani ngokunxibelelana noThixo? Ngaba sinokuthetha noYehova? Yingcamango eyoyikekayo leyo. Ukuba ubunokuzama ukufikelela koyena mphathi uphakamileyo ezweni lakho ukuze uthethe naye ngezinto ezikuxhalabisileyo, ebeya kuba ngakanani amathuba okufikelela kuye? Kwezinye iimeko, kwaukuzama ngokwakho kunokuba yingozi! Ngemihla kaEstere noMordekayi, umntu wayesenokubulawa ngokuya kumlawuli wasePersi engamenywanga ngukumkani. (Estere 4:10, 11) Ngoku khawuzithelekelele usiya phambi kweNkosi enguMongami wendalo iphela, kulowo kwanabona bantu banegunya eliphakamileyo ‘banjengeentethe.’ (Isaya 40:22) Ngaba sifanele soyike ukusondela kuye? Akunjalo konke konke!
11 UYehova usivulele indlela elula yokusondela kuye—umthandazo. Kwanomntwana oselula kakhulu unokuthandaza kuYehova ngokholo, egameni likaYesu. (Yohane 14:6; Hebhere 11:6) Ukanti, umthandazo ukwasenza sikwazi ukudlulisela ezona ngcamango neemvakalelo zethu ezinzulu—kwanezona zibuhlungu esikufumanisa kunzima ukuzichaza. (Roma 8:26) Akuncedi nto ukuzama ukuchukumisa uYehova ngokumtyibela ngemilembelele yemithandazo yobuciko. (Mateyu 6:7, 8) Kwelinye icala, uYehova akasisikelanga mda kubude nakwizihlandlo esinokuthetha naye ngazo. ILizwi lakhe lide lisikhuthaze ukuba ‘sithandaze ngokungapheziyo.’—1 Tesalonika 5:17.
12 Khumbula ukuba nguYehova kuphela obizwa ngokuba ‘nguMphulaphuli wemithandazo,’ yaye uphulaphula ngovelwano lokwenene. (INdumiso 65:2) Ngaba uyifumanisa iyindinisa imithandazo yabakhonzi bakhe abathembekileyo? Akunjalo, kunoko uyayoliswa yiyo. ILizwi lakhe liyifanisa imithandazo enjalo kunye neziqhumiso ezinevumba elimnandi nomsi othozamisayo. (INdumiso 141:2; ISityhilelo 5:8; 8:4) Akuthuthuzeli na ukucinga ukuba imithandazo yethu enyanisekileyo nayo iyanyuka ize iyikholise iNkosi enguMongami? Ngoko ukuba ufuna ukusondela kuYehova, thandaza ngokufuthi kuye ngokuzithoba, suku ngalunye. Khuphela yonke imbilini yakho kuye; ungamfihleli nto. (INdumiso 62:8) Yabelana noYihlo osemazulwini ngeenkathazo zakho, uvuyo onalo, imibulelo namazwi okumdumisa. Ngaloo ndlela, ulwalamano oluphakathi kwakho naye luya kuqina ngakumbi.
13, 14. Kuthetha ukuthini ukunqula uYehova, yaye kutheni kufanelekile nje ukuba senjenjalo?
13 Xa sinxibelelana noYehova uThixo, asaneli nje ngokuphulaphula nokuthetha njengaxa sikunye nomhlobo okanye isalamane. Enyanisweni sukuba simnqula uYehova, simnika intlonelo emfaneleyo. Ubomi bethu bonke bulawulwa lunqulo oluyinyaniso. Luyindlela esibonisa ngayo uthando nokuzinikela kwethu ngomphefumlo uphela kuYehova, yaye lumanyanisa zonke izidalwa ezithembekileyo zikaYehova, enoba zisezulwini okanye emhlabeni. Embonweni, umpostile uYohane weva ingelosi ivakalisa lo myalelo: “Mnquleni Lowo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.”—ISityhilelo 14:7.
14 Kutheni sifanele sinqule uYehova? Cinga nje ngeempawu esiye saxubusha ngazo, njengobungcwele, amandla, ukuzeyisa, okusesikweni, inkalipho, inceba, ubulumko, ukuthobeka, uthando, imfesane, ukunyaniseka nokulunga. Sibonile ukuba uYehova umisela eyona milinganiselo iphakamileyo yophawu ngalunye oluxabisekileyo. Xa sizama ukuhlolisisa ubunzulu bazo zonke iimpawu zakhe, siyaqonda ukuba ungaphezulu lee kokuba nguMntu omkhulu nothandekayo. Uzuke ngokugqithiseleyo, yaye uphakame ngokungathethekiyo kunathi. (Isaya 55:9) Ngokungathandabuzekiyo, uYehova unelungelo lokuba nguMongami wethu, yaye ngokuqinisekileyo ukufanelekele ukunqulwa sithi. Noko ke, sifanele simnqule njani uYehova?
15. Sinokumnqula njani uYehova “ngomoya nenyaniso,” yaye liliphi ithuba esilivulelwa ziintlanganiso zamaKristu?
15 UYesu wathi: “UThixo unguMoya, nabo bamnqulayo bamele banqule ngomoya nenyaniso.” (Yohane 4:24) Oko kuthetha ukumnqula uYehova ngentliziyo ezaliswe lukholo nothando, nekhokelwa ngumoya wakhe. Kwakhona kuthetha ukumnqula ngokuvisisana nenyaniso, ulwazi oluchanileyo olufumaneka eLizwini likaThixo. Sinelungelo elixabisekileyo lokumnqula uYehova “ngomoya nenyaniso” xa sihlanganisene nabo sinqula kunye nabo. (Hebhere 10:24, 25) Xa sivumela uYehova iindumiso, sithandaza kuye ngokumanyeneyo, yaye siphulaphule size sibe nenxaxheba kwiingxubusho ezisekelwe eLizwini lakhe, sibonisa ukumthanda ngokunikela kwethu unqulo olunyulu.
Iintlanganiso zamaKristu zizihlandlo ezichulumancisayo zokunqula uYehova
16. Nguwuphi omnye weyona miyalelo mikhulu enikwe amaKristu okwenyaniso, yaye kutheni siziva sinyanzelekile ukuba siwuthobele?
16 Kwakhona sinqula uYehova xa sithetha ngaye kwabanye, simdumisa esidlangalaleni. (Hebhere 13:15) Enyanisweni, ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaYehova kungomnye weyona miyalelo mikhulu eyanikwa amaKristu okwenyaniso. (Mateyu 24:14) Sithobela ngolangazelelo kuba siyamthanda uYehova. Xa sicinga ngendlela “uthixo wale nkqubo yezinto,” uSathana uMtyholi, ‘aye wazimfamekisa ngayo iingqondo zabangakholwayo,’ esasaza ubuxoki benkohlakalo ngoYehova, ngaba asikulangazeleli na ukukhonza njengamaNgqina kaThixo wethu, sisuse olo gculelo? (2 Korinte 4:4; Isaya 43:10-12) Yaye xa sicamngca ngeempawu ezimangalisayo zikaYehova, ngaba awukhuli umnqweno wethu wokufuna ukuxelela abanye ngaye? Eneneni, akukho lungelo likhulu ngakumbi kunokunceda abanye bamazi baze bamthande uBawo wethu osemazulwini njengoko nathi simthanda.
17. Ukunqula kwethu uYehova kubandakanya ntoni, yaye kutheni simele sinqule ngengqibelelo?
17 Ukunqula kwethu uYehova kubandakanya okungakumbi. Kuchaphazela nkalo nganye yobomi bethu. (Kolose 3:23) Ukuba simamkela ngokwenyaniso uYehova njengeNkosi yethu enguMongami, ngoko siya kufuna ukwenza ukuthanda kwakhe kuyo yonke into—kubomi bethu bentsapho, emsebenzini wethu wempangelo, ekusebenzisaneni kwethu nabanye, nangexesha lethu lobuqu. Siya kufuna ukumkhonza uYehova “ngentliziyo epheleleyo,” ngengqibelelo. (1 Kronike 28:9) Unqulo olunjalo alukuvumeli ukuba nentliziyo eyahluleleneyo okanye ubomi obumbaxa—ikhondo lohanahaniso lokubonakala njengomkhonzi kaYehova ngoxa uqhubeka nezono ezinzulu ngasese. Ingqibelelo yenza sikuphephe ukuhanahanisa okunjalo; uthando lwenza sikuthiye. Uloyiko lobuthixo nalo luya kusinceda. IBhayibhile iyinxulumanisa intlonelo enjalo kunye nolwalamano lwethu olusenyongweni noYehova.—INdumiso 25:14.
18, 19. Kutheni kusengqiqweni ukucinga ukuba abantu abangafezekanga banako ukuxelisa uYehova uThixo?
18 Candelo ngalinye lale ncwadi liye laqukumbela ngesahluko esibonisa indlela ‘esinokumxelisa ngayo uThixo, njengabantwana abaziintanda.’ (Efese 5:1) Kubalulekile ukukhumbula ukuba nangona singafezekanga, ngokwenene sinako ukuxelisa indlela egqibeleleyo kaYehova yokusebenzisa igunya, yokubonisa okusesikweni, yokwenza ngobulumko, neyokubonisa uthando. Sazi njani ukuba sinokukwazi ngokwenene ukuxelisa uSomandla? Khumbula ukuba, intsingiselo yegama likaYehova isifundisa ukuba uzenza abe yiyo nantoni na akhetha ukuba yiyo ukuze afeze iinjongo zakhe. Lawo ngamandla oyikekayo ngokwenene, kodwa ngaba oko kuthetha ukuba asinako kwaphela ukumxelisa? Akunjalo.
19 Senziwe ngokomfanekiso kaThixo. (Genesis 1:26) Ngoko, abantu abafani nazo naziphi na ezinye izidalwa emhlabeni. Asilawulwa nje kuphela lithuku, imfuza, okanye imeko-bume esijikelezileyo. UYehova usinike isipho esixabisekileyo—inkululeko yokuzikhethela. Phezu kwazo nje iintsilelo nokungafezeki kwethu, sikhululekile ukuba sizikhethele oko sifuna ukuba kuko. Ngaba ufuna ukuba ngumntu onothando, onobulumko nolilungisa olisebenzisa kakuhle igunya? Ngoncedo lomoya kaYehova, unako kanye ukuba lolo hlobo lomntu! Khawucinge nje ngezinto ezintle oya kukwazi ukuzifeza.
20. Ziziphi izinto ezintle esizifezayo xa sixelisa uYehova?
20 Uya kumkholisa uYihlo osemazulwini, uyivuyise intliziyo yakhe. (IMizekeliso 27:11) Usenokude ‘umkholise ngokupheleleyo’ uYehova, kuba uyaziqonda iintsilelo zakho. (Kolose 1:9, 10) Yaye njengoko uqhubeka uxelisa iimpawu ezintle zikaYihlo osemazulwini, uya kusikelelwa ngamalungelo amakhulu. Kweli hlabathi lobumnyama elahlukanisiweyo noThixo, uya kuba ngumthwali wokukhanya. (Mateyu 5:1, 2, 14) Uya kunceda ekusasazeni emhlabeni ubuntu obuzukileyo bukaYehova. Hayi indlela elizuke ngayo elo lungelo!
“Sondelani KuThixo, Naye Uya Kusondela Kuni”
Ngamana ungasoloko usondela ngakumbi kuYehova
21, 22. Luluphi uhambo olungenasiphelo oluphambi kwabo bonke abo bamthandayo uYehova?
21 Isibongozo esilula esibhalwe kuYakobi 4:8 singaphezu kokuba lusukelo nje kuphela. Siluhambo. Logama sihlala sithembekile, olo hambo alusayi kuze luphele. Asisayi kuze siyeke ukusondela ngakumbi nangakumbi kuYehova. Ngapha koko, kuya kusoloko kukho izinto ezintsha esinokuzifunda ngaye. Asifanele sicinge ukuba le ncwadi isixelele yonk’ into ngoYehova. Kaloku, asisondelanga nokusondela ekuchazeni konke oko iBhayibhile ikuthethayo ngoThixo wethu! KwaneBhayibhile ngokwayo ayisixeleli yonk’ into ngoYehova. Umpostile uYohane wathi ukuba bezinokubhalwa zonke izinto awazenzayo uYesu ebudeni bobulungiseleli bakhe basemhlabeni, “ihlabathi ngokwalo belingenakuyiqulatha imisongo ebinokubhalwa.” (Yohane 21:25) Ukuba kunokuthethwa ngolo hlobo ngoNyana, kubeke phi ke ngoYise!
22 Kwanobomi obungunaphakade abusayi kusenza sifunde yonk’ into ngoYehova. (INtshumayeli 3:11) Ngoko, khawucinge nje ngethemba eliphambi kwethu. Emva kokuphila kangangamakhulukhulu, amawakawaka, izigidi, kwanamawaka ezigidi zeminyaka, siya kwazi okuninzi ngakumbi ngoYehova uThixo kunokuba sisazi ngoku. Kodwa siya kuvakalelwa kukuba kusekho izinto ezimangalisayo ezininzi ngokungathethekiyo ekusafuneka sizifundile. Siya kukulangazelela ukufunda okungakumbi, kuba siya kusoloko sinesizathu sokuvakalelwa njengomdumisi, owacula wathi: “Ukusondela kuThixo kulungile kum.” (INdumiso 73:28) Ubomi obungunaphakade buya kuchulumancisa ngendlela engathethekiyo—yaye ukusondela ngakumbi kuYehova kuya kusoloko kuyeyona nxalenye yabo inomvuzo.
23. Yintoni okhuthazwa ukuba uyenze?
23 Ngamana ungasabela ngoku eluthandweni lukaYehova, ngokuthi umthande ngayo yonke intliziyo, umphefumlo, ingqondo namandla akho ephela. (Marko 12:29, 30) Ngamana uthando lwakho lungaba lolunyanisekileyo nolungagungqiyo. Ngamana zonke izigqibo ozenzayo suku ngalunye, ukususela kwezona zincinane ukusa kwezona zinkulu, zingabonisa ukuba uzimisele ukusoloko ukhetha indlela ekukhokelela ekubeni ube nolwalamano oluqine ngakumbi noYihlo osemazulwini. Ngaphezu kwako konke, ngamana ungaqhubeka usondela ngakumbi kuYehova, naye asondele ngakumbi kuwe—ngonaphakade!
INdumiso 25:1-22 Sinokusondela njani ngakumbi kuYehova, yaye ngenxa yoko yiyiphi intembelo esinokuba nayo?
Hoseya 6:3 Le ndinyana ibonisa njani ukuba ukumazi uYehova kufuna umgudu yaye kuzisa iintsikelelo?
Mateyu 16:21-27 Ukuze sixelise uYehova, ngumzekelo kabani esifanele siwulandele, yaye sisiphi isimo sengqondo esifanele sisibonise?
ISityhilelo 21:3, 4 Njengoko ucamngca ngeentsikelelo zexesha elizayo aza kuzizisa uYehova, yintoni oshukunyiselwa ukuba uyenze?
Sinelungelo lokuba yinxalenye yentlangano kaThixo. Yintoni esinokuyenza ukuze sixhase umsebenzi ewenzayo namhlanje?
UYehova uThixo ukuthanda ngokwenene. Unokuwubonisa njani umqweno wakho wokuMkholisa ebomini bakho?